Dallada SSE oo Dareen Taban ka Muujisey Shaqaaqada Ka Dhacdey Magaalooyinka Hargeysa iyo Burco | Togdheer News Network
Dallada SSE oo Dareen Taban ka Muujisey Shaqaaqada Ka Dhacdey Magaalooyinka Hargeysa iyo Burco
Dallada SSE oo ay ku bahoobeen ururada Somaliland ee Yurub waxa ay baaqan kooban ku muujinayaan dareenka taban ee ka dhashay shaqaaqooyinkii ka dhacey dhowr goobood oo ah magaalooyinka kor ku xusan.
Ugu horreyn Dalladu waxay tacsi tiiraanyo leh u direysaa eheladii iyo asxaabtii dadka ku geeriyoodey rabshadahaa aan loo baahneyn oo dhaawac ku ah karaamada dalka iyo dadka reer Somaliland. Sidoo kale Dalladu waxay caafimaad degdeg ah Ilaahay uga baryayaan dhammaan dadkii dhaawacyada ka soo gaadheen rabshadahaa. Dalladu dareen taban ayay ka muujinaysaa in doorashadii sida quruxda badan inoogu dhacdey in laga dambeysiiyo rabshado keenay dhimasho, dhaawac iyo khasaare maal.
Madaxda iyo mas’uuliyiinta Xisbiya
Mas’uuliyiin saddexda Xisbi Qaran ee ku tartamaya doorashada Madaxtooyada Somaliland ee qabsoontey 13kii Noofember waxa saaran mas’uuliyad iyo waajibaad ballaadhan. Mas’uuliyiinta waa ku waajib inay dalkooda iyo dadkooda u tudhaan oo ka ilaaliyaan wax-kasta oo kicinaya shucuurta iyo dareenka dadka. Waxa habboon in wixii tabasho ah lagu dhammeeyo si mas’uuliyad ah oo loo maro nidaamka anshaxa doorashooyinka. Dallada SSE way fahmi kartaa in khilaafaad iyo is-fahan darro ay ka dhalan karaan natiijada doorashada Madaxtooyaddda Somaliland, laakiin waxa mahuraan ah in mas’uuliyiinta Xisbiyaddu ay wadashaqeyn buuxda la yeeshaan Komishanka doorashooyinka sidii loo sugi lahaa natiijada rasmiga ah.
Dalladu waxay ogsoontahay culeyska saaran Guddiga Doorashooyinka iyo hawsha baaxada leh ee sugaysa si ay u sugaan sidii loo soo saari lahaa natiijada saxda ah. Dalladu waxay guddiga ka rajaynaysaa in wixii tabasho ah loo maro nidaamka iyo habka waafaqsan anshaxa doorashada isla markaana is-fahan iyo is-qancin lagu saleeyo wixii khilaafaad ah inta aan lagu dhawaaqin natiijada saxda ah ee kama dambeysta ah. Dallada SSE waxay Guddiga Doorashooyinka ku bogaadinayaan mas’uuliyada iyo hawlkarnimada ay ilaa hadda muujiyeen.
Xukuumadda iyo Golayaasha kale ee Qaranka oo adeegsanaya ciidanka Qaranka Somaliland ayaanu ka rajaynaynaa in la sugo nabadgelyada waddanka inta Guddiga Doorashooyinku ay ku dhawaaqayaan natiijada kama dambeysta ah.
Dallada SSE waxay ku bogaadineysaa dadweynaha Somaliland gobannimadii iyo wanaagii ay muujiyeen maalintii cod-bixinta iyo weliba dulqaadkii ay muujiyeen oo keenay in doorashadu ay u dhacdo si nabadgelyo ah. Guud ahaan dadweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa aannu kula dardaarmaynaa inay ilaashadaan nabadda iyo xasilloonida oo aasaas u ah nolosha iyo deganaanshaha. Dallada SSE waxay idinla wadaageysaa in hal jid oo keliya aynu haysano kaasina uu yahay ka nabadda oo aynu wax walba ka horumarineyno sidii loo ilaashan lahaa lahaa Qarannimada iyo Dowladnimada la haysto.
Gunaanad ahaan waxa naga xasuusin ama dardaaran ah in la ogsoonaado in cadowga Somaliland uu badan yahay. Mashaariic iyo qorshayaal aan tiro yareyn ayaa innagu soo maqan oo la rabo in lagu dhantaalo midnimada dadka reer Somaliland ee ilaa hadda ku suntan ahaanshaha hal-qudha. Mas’uuliyad ayaa inaga wada saaran adkeynta midnimada laakiin mas’uuliyad gaar ahi waxay sii saarantahay Mas’uuliyiinta saddexda Xisbi Qaran ee ku tartamaya doorshada oo iyaga looga baahanyahay inay muujiyaan hoggaan tusaale u noqda bulshada inteeda kale.
Guul iyo gobanimo ayaynu rajaynaynaa dhammaan dadka reer Somaliland.